राजपा सांसद्ले किन गरे विमानस्थल तोडफोड ? – Nepali Digital Newspaper
राजपा सांसद्ले किन गरे विमानस्थल तोडफोड ?
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 11 months ago October 15, 2019
सर्लाही–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य साहले बुद्ध एयरको फ्लाइट डिले भएको भन्दै जनकपुर विमानस्थलमा रहेको काउन्टर तोडफोड गरेका हुन् । ११ः३० बजेको बुद्ध एयरको जहाजबाट काठमाडौँ जान हिजो सोमबार साह विमानस्थल पुगेकोमा जहाज करीब एक घण्टा ढिलो भएपछि आक्रोशित हुँदै विमानस्थलभित्र बुद्ध एयरको काउन्टरका साथै विशिष्ठ कक्षको टेबल कुर्सी उनले तोडफोड गरेका थिए ।
तोडफोडबाट बुद्ध एयरको काउन्टरको सिसाका साथै कम्प्युटरमा क्षति पुगेको छ । एयर ट्राफिकका कारण विमान नियमित समयभन्दा करीब एक घण्टा ढिलो भएको एयप्रष्टिकरण दिँदै बुद्ध एयरका जनकपुर प्रबन्धक विजयप्रसाद सिंहले ‘विमान किन ढिलो भएको ?’ भन्दै आक्रोशमा आएर सांसद साहले काउन्टरमा तोडफोड गरेका बताए ।
‘सांसद साहले बुद्ध एयरको काउन्टरमा बबाल गर्नुभयो, विशिष्ठ कक्षको टेबल सीसाको ग्लास फुटालेको हामीलाई जानकारी आयो, त्यसलगत्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक कमाण्डमा अनुसन्धान टोली पठायौँ । अवरोध गरेकाले कानूनी कारवाही गर्ने तयारी थियो । तर बुद्ध एयरले सांसद भएको भन्दै कारवाही नगर्न आग्रह गरेपछि उहाँलाई यात्रा अनुमति दिइएको छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेललाई उद्धृत गर्दै राससले जनाएको छ ।
यात्रा अनुमति दिइए पनि साहले गरेका व्यवहारबारे सत्यतथ्य बुझेर के गर्नेबारे निक्र्यौलमा पुगिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलको भनाई छ । सांसद साहले चाहिँ बुद्ध एयरसमक्ष आत्मालोचना गरेका बुझिएको छ ।
‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ बस्ने ६५ वर्षीय सौखीलाल चौधरी किड्नीका बिरामी थिए । उहाँलाई दिउँसो २ बजेसम्ममा चिकित्सक कहाँ पुगेर जाँच गराउनुपर्ने थियो । तर विमान आउन निकै ढिला भइरहेको थियो । त्यही आबेगमा आएपछि मैले तोडफोड गरेको हुँ’, सांसद साहको प्रष्टिकरण छ ।
बुद्ध एयरका व्यवस्थापन प्रमुख विजयकुमार सिंहले काठमाडौँ विमानस्थलकै प्राविधिक कारणले विमान ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे । ‘हामीले यो विषयमा यात्रुलाई जानकारी पनि गराएका थियौँ । तर सांसद साहले आक्रोशमा आएर बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गर्न थाल्नुभयो । हाम्रा कर्मचारीसँग दुव्र्यवहार पनि गर्नुभयो’, सिंहले भने ।